Ny Fomba Nataon’ny ‘Amerikana Iray Mpitsikilo’ Namoahana Ny Mety Ho Hosoka Tamin’ny Fifidianana Rosiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Oktobra 2016 11:22 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, русский, Français, Español, English
“Mpitsikilo Tahaka Anay.” Navoakan'i Kevin Rothrock.
(Lahatsoratra nivoaka tamin'ny teny Anglisy ny 23 Sept)
Efa ho herinandro izao no nanao fifidianana parlemantera ireo Rosiana, fotoana izay nahabetsaka ireo fanamelohana mikasika ny hosoka tamin'ny fifidianana hiparitaka tamin'ny tambajotra. Ny ampamoaka tena mahatsiravina indrindra dia toa avy amin'ny mpanao bilaogy sy mpahay fizika, Sergei Shpilkin, izay namoaka antontan'isa manaporofo fa efa ho ny antsasaky ny vato narotsak'i Rosia Mitambatra, antoko politika eo amin'ny fitondrana dia hosoka avokoa.
Shpilkin, izay nizara ny porofo mikasika ny antontan'isan'ny hosoka midadasika mitovitovy amin'izany tamin'ny fifidianana tamin'ny taona 2011, dia manamafy fa ny tena fandraisana anjara tamin'ny fifidianana dia 11 isan-jato, ambany noho izay nambaran'ireo mpiasam-panjakana, tsotra fotsiny, midika izany fa noforonina avokoa ny vato miisa an-tapitrisany. (Araka ny fandikàn'i Shpilkin ireo angona tamin'ny fifidianana, ny vokatra azon'ny Rosia Mitambatra tamin'ny Alahady 18 Sept lasa teo dia tsy mifanaraka amin'ireo vinavina fototra ara-politika ataon'ireo mpahay siansa mikasika ireo fifidianana malalaka sy misokatra.)
Fanehoana noforomporonina an'i Rosia Mitambatra mikasika ny fanombantombanana Gaussian. Sary: an'i Sergei Shpilkin / LiveJournal.
Ny andron'ny fifidianana, ny tatitr'ireo mpanao gazety avy ao amin'ireo biraom-pifidianana manerana an'i Rosia dia nahitana tantara fohy betsaka manamafy ny tsoakevitr'i Shpilkin. Ny masoivohom-baovaon'ny Reuters, ohatra, nifidy kisendrasendra fotsiny biraom-pifidianana 11, nandefasana mpanao gazety manerana ny afovoan-tanàna sy tany andrefan'i Rosia mba hanisa ireo olona nandatsa-bato sy hanaraka izay mety ho fandikàn-dalàna.
Soritan'ny tatitry ny Reuters mikasika ny fifidianana, “Ireo Mpifidy Matoatoa, Ahiahy Fisiana Vatom-pifidianana Nampidirina an-tSokosoko tamin'ny Lalao Ratsin'ny Fifidianana Rosiana,” ireo tsy fanarahan-dalàna marobe, anisan'izany ireo vatam-pifidianana efa voasesika, ny olona mifidy imbetsaka, ary raha ny marina, na dia ny fitarainana iray izay nentin-tànana, fanisàna mekanika, natolotry ny mpanao gazety iray aza dia tena “fitaovana iray vita manana natiora radioaktifa.”
Ny 22 Septambra teo, nanapaka hevitra ny hampitaha ireo vokatra avy ao amin'ireo biraom-pifidianana samihafa tao Ufa ny Rosiana mpanao bilaogy iray, Alexander Kireev, mba hitsaràna ny mety ho vokatry ny asa fanarahamaso ataon'ireo mpanao gazetin'ny Reuters tany amin'ny biraom-pifidianana iray ao amin'ny faritra. Hitan'i Kireev fa ny tahan'ny fahatongavana tao amin'ny birao fifidianana laharana 62 izay nisy an'i Jack Stubbs (izay nohosorana ho “mpitsikilo Amerikana,” nefa izy Britanika) dia nisy nifandraisany tamin'ireo voka-pifidianana izay tsy nampitovy velively tamin'ny birao fanisam-bato hafa rehetra tao amin'ny faritra.
Raha nanoratra lahatsoratra iray mitondra ny lohateny hoe “Ny Fomba Nataon'ny Amerikana iray Mpitsikilo Hanavotana ny Vatom-pifidianan'ireo Olona Monina ao An-tanànan'i Bashkirian,” ho an'ny LiveJournal, asehon'i Kireev an-tsary (voahaingo tamina emoji mananihanin'ny mpitsikilo iray) fa ny Birao Fanisàm-bato 62 no iray amin'ireo biraom-pifidianana roa monja tao amin'ny faritra Ufa manontolo ahitana tahan'ny fandraisana anjara ambanin'ny 30 isan-jato. Mbola tena misitery: Rosia Mitambatra nahazo mpanohana ambany lavitra noho ny salanisa azony manerana ireo faritra hafa any rehetra any, ary ilay antoko kely indrindra, mpanohitra an'i Kremlin “Yabloko” tsy malaza raha ny fahenoana azy, nahazo ny isan-jaton'ireo vato in-20 maherin'izay tokony ho azony tamin'ireo faritra hafa rehetra tao Ufa.
(Mivaky toy izao ireo tsanganana eto ambany, avy any ankavia miankavanana: fandraisana anjara, Rosia mitambatra, ny Antoko liberaly-demokratin'i Rosia, Yabloko, ny Antoko kominista ary Rosia Fotsiny Ihany. Ny andalana tsirairay manaraka ny andalana voalohany dia mampiseho biraom-pifidianana samihafa.)
Ireo vokatry ny fifidianana tao amin'ny faritr'i Ufa.
Olana foana amin'ny fandikàna azy ireo isa, tahaka ny mahazatra, sady angamba ny Biraom-pifidianana 62 tsy dia manan-danja loatra amin'ireo fironana matanjaka tamin'ny fifidianana tamin'ny Alahady 18 Sept. Raha toa tsy io ny tranga misy, na izany aza, azo heverina ihany fa vitan'ny mpanao gazety iray avy amin'ny Reuters ny nampibaribary hoe ahoana marina no tena fandehan'ireo fifidianana tao Rosia.
11 ora izayBangladesh